Taovolon'ny Prince nanomboka tamin'ny 1978 ka hatramin'ny 2013 | Famoronana an-tserasera
Alakamisy lasa teo, Prince, a mpanakanto manan-talenta tokana miavaka fantatry ny maro amin'ny feony miavaka fa ilay tao amin'ny gitara dia nanana fanomezana be dia be izy. Mpihira, mpitendry gitara ary mpandihy izay nanana ny filan-keviny lehibe ho an'io loko volomparasy manokana an'ny sasany amin'ny hirany io toa ny emblematika Purple Rain.
Hanatanteraka a fanomezam-boninahitra kely amin'ireo taovolo hafa ireo izay niova nandritra ny androm-piainany namaritra ny fahaizany mamorona sy ny talenta lehibe namelany antsika hira izay naneho ireo taona 80 sy 90. Taona iray izay Nandao antsika koa i David Bowie, mpanakanto kanto maro karazana sy chameleonic hafa.
Toa an'i Bowie, Prince dia mahay mamerina mamorona ny tenany ary mandeha miovaova nandritra ny taona maro nefa tsy namoy ny fotony manokana. Nanova ny anarany farafahakeliny impito farafaharatsiny izy ary nitendry karazana hafa nandritra ny androm-piainany.
Androany dia fantatro izany Prince dia afaka namoaka rakipeo vaovao isan-taona ho an'ny zato manaraka. Ny fahaizan'izy ireo sy ny fahaizany voajanahary dia ny faharetany miaraka amintsika mandritra ny am-polony taona maro, satria toy ny ankamaroan'ny mpanakanto dia miha-fantatra kokoa izy ireo rehefa fantatsika fa tsy hanana izany loharanom-aingam-panahy izany intsony isika hitondrana antsika feo hafa sy hira hafa.
Ary io dia tsy niresaka momba ny endriny amin'ny mozika fotsiny isika, fa izy koa dia mpilalao sarimihetsika, talen'ny famokarana. Zava-misy mahaliana izay mifandraika amin'ny fombany, ny iray amin'ireo toetra tsara nananan'io volomparasy izay akaiky azy io dia izany niova taovolo in-36 nanomboka ny taona 1978 ka hatramin'ny 2013.
Araka ny hitanao amin'ny sary nataon'i Gary Card, Prince hatrany hatrany nanana lamaody sy fomba fanao amin'ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fiainany. Ary tsy ny fanarahany fironana no narahiny fa ny nieritreretany azy ireo na ny nandehanany tany amin'ny toerana hafa, zavatra izay namaritra azy ho mpanakanto ihany koa.
Un mpanakanto sy mpitendry zavamaneno izay hanentana hatrany ny olona an-jatony amin'ny am-polony taona ho avy ary izany dia ao aminy Purple Rain afaka mahita an'io nostalgia io isika nandritra ny andro tsy nahitana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Miderà an'i Prince, ilay mpilalao mahay indrindra nanova ny taovolony in-36 tamin'ny 1978 ka hatramin'ny 2013